HTC U Ocean - ပထမဆုံးဓာတ်ပုံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ | Androidsis
ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီက HTC အနေဖြင့်၎င်းကိုစတင်ရန်အစီအစဉ်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် HTC က 11နှင့်ပရိသတ်များသည် U Ultra အတွက်သာအခြေချခဲ့သည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ယခုနှစ်တွင် U "ဟုအမည်ပေးထားသော high-end device ကိုထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်နေပုံရသည်"သမုဒ္ဒရာ"။
HTC U Ocean သည်ယခုလတွင်ပွဲ ဦး ထွက်ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပြီးလူသိများသော Evan Blass မှတစ်ဆင့်၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များရရှိနိုင်သည်။ လက်ရှိရရှိနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူပရီမီယံမိုဘိုင်း.
1 HTC U Ocean ဒီဇိုင်း
2 HTC U Ocean ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
HTC U Ocean ဒီဇိုင်း
Blass မှတွစ်တာတွင်တင်ထားသောဓာတ်ပုံများအရ HTC mobile အသစ်သည် U Ultra နှင့်အလွန်ဆင်တူသော်လည်းနောက်ကင်မရာသည်စတုရန်းအစားအဝိုင်းဖြစ်သည်။ Dual LED flash နှင့်အတူတူသတ္တုအရည် effect ကိုဆေးသုတ်ပုံနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရှေ့ဘက်တွင်, လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာမျက်နှာပြင်အောက်မှာရပ်နှင့်ထောင့်နှင့်ဘောင်ဝိုင်း။
HTC U Ocean ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
HTC U Ocean သည်ပုံတွင်ပြထားသည် ၅.၅ လက်မ Quad HD မျက်နှာပြင် (2560 x 1440 pixels) ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုထားသည် Snapdragon 835 Qualcomm နှင့် RAM 4GB။ ထိုနည်းတူစွာပင် internal memory 64GB / 128GB ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည် သော microSD.
ကင်မရာအရ HTC U Ocean သည်ဂုဏ်ယူမည် Sony IMX12 အာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူ 362-megapixel အနောက်ကင်မရာရှေ့တစ် resolution အတွက်ရှိလိမ့်မည်နေစဉ် 16 megapixels နှင့်တစ် ဦး ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် IMX351 အာရုံခံကိရိယာ Sony မှပါ။
ထင်ရှားသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုအနေဖြင့်သတိပြုရန်မှာ HTC U Ocean သည်aထိတွေ့မှုဘောင် အမူအရာအားအသုံးပြုသူများအားအမူအရာများမှတစ်ဆင့်ပစ္စည်း၏အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတွင် HTC U Ocean သည်လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မည် အန်းဒရွိုက် 7.1 Nougat စိတ်ကြိုက်အလွှာနှင့်အတူ Sense သည်9HTC မှ။
ယခုအချိန်အထိ HTC U Ocean ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစျေးနှုန်းနှင့်စတင်ရောင်းချမည့်ရက်ကိုမသိရသေးပါ၊ သို့သော်ဤပေါက်ကြားမှုအားလုံးသည်၎င်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် HTC ၏ထင်ရှားသောအမှတ်အသားဖြစ်လိမ့်မည်ကိုညွှန်ပြနေသည်။
Fuentes: အီဗန်ဘလက်စ် (တွစ်တာ)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC U Ocean - ပထမဆုံးဓာတ်ပုံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
လူသတ်မှုကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီးနောက် Facebook ကတုံ့ပြန်သည်